Zinedine Zidane oo xaqiijiyay bixitaanka mid ka mid ah xiddigaha kooxda Real Madrid – Gool FM
(Madrid) 21 Jan 2020. Tababaraha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa xaqiijiyay bixitaanka mid ka mid ah xiddigaha Los Blancos inta lagu gudi jiro suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee bishan Janaayo.
Zinedine Zidane ayaa si cad u sheegay in Alvaro Odriozola uu ka tagayo garoonka Santiago Bernabéu inta lagu gudi jiro bishan Janaayo, laakiin wuxuu iska diiday inuu xiiseynaayo lasoo wareegitaanka ciyaaryahan cusub oo badelkiisa ah.
Alvaro Odriozola ayaan tababarka la qaadanin asxaabtiisa kale ee Real Madrid maanta oo Talaado ah, madaama uu isku diyaarinayay inuu ugu dhaqaaqo kooxda Bayern Munich heshiis amaah oo mudo Lix bilood ah, sida laga soo xigtay ilo wareedyo gudaha wadanka Spain ah.
Haddaba Zinedine Zidane ayaa shir jaraa’id uu ka soo muuqday waxaa lagu weydiiyay su’aalo dhowr ah ee quseeya kooxdiisa wuxuuna ku jawaabay:
“Haa, waxa uu heystaa doorasho ah inuu baxo, laakiin weli si rasmi ah uma dhicin, wax walba waa macquul inay dhacaan”.
“Alvaro Odriozola si rasmi ah uma bixin ilaa iyo haatan, uma fasixi doono ciyaaryahan si aan u keensado mid kale, sababtoo ah waxaan heystaa liis dheer oo ciyaartooy ah”.
Dhinaca kale tababaraha reer France ayaa shaaca ka qaaday in ka maqnaanshiyaha xiddigaha James iyo Bale ee kulankii Real Madrid iyo Seville ay la xiriirtay dhibaatooyin jir ahaaneed, wuxuuna iska diiday in arrintaas ay la xiriirto wararka xanta ku saabsan mustaqbalkooda suuqa kala iibsiga.
Zinedine Zidane oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu yiri:
“James iyo Bale ma ciyaarin kulankii ugu dambeeyay, sababa la xiriira dhibaato jir ahaaneed oo yar awgeed, laakiin haatan waa la heli karaa”.
SHAX isku dhaf ah oo laga sameeyay Kooxaha Chelsea vs Arsenal ka hor kulankooda caawa ee Premier League… (Yaa xiddigaha ugu badan ku leh?)